Fatawa - Maktabada.com » Soonka
Tusmo - sitemap
Waa maxay qaybtan?
Arrimaha somaliya (7)
Talo bixin (5)
Zakatul fitriga (10)
Kuwa ugu dameeyey
Su’aal # 176: Dacwada Salafiyada Xaqiiqdeedu Maxay tahay?
Su’aal #175: Xoolo aadan shaqaysan Sadaqo aad ka bixsay?
Su’aal #174: Qof 4 Ramaad lagu leeyahay?
Su’aal #173: Asturaada dumarka Kolka salaada?
Su’aal #172: Aabaha wiilkiisa oo xaas leh zakatul fitriga ma siin karaa?
Su’aal #171: Qof deyn kii kulahaa kala lumeen
Su’aal #170: Dadka miyaga jogaa Laylatul qadriga wax ma ku leeyihiin?
Su’aal #169: hooyada reer Zakaatul fitri ma bixin kartaa?
Su’aal #168: Amaah ma ku bixin karaa Zakaatul fitriga?
Su’aal #167: Arday aan awoodin Zakaatul firtiga?
Su'aal miyaad qabtaa?
Haddii aad su'aal qabto, soo dir. Taabo Halkan
Dadka online ah hadda
Lama yaqaan waddanka 1
oktober 18th, 2008 by Nasir
Hadii 4 Ramadaan la igu leeyahay qale sidaan u qalayn karaa anigoo ah Inan(gabadh) 18 jir ah?
Halkan ka dhagayso jawaabta
Halkan ka qaado (download)
Ka mid ah qaybta Soonka | No Comments »
Dadka tukada salaatu laylaka iyo muctakifiinta iyo dadka kale aan tukan salaatu laylka ee taraawixda un tukada marna iska daaya iyo waliba dadka guryahooda iska jooga miye iyo magaalaba ma helayaan habeenkaas barakaysan ee khayrka badan waayo dadkii miyaga waa bilaa masaajid.?
halkan ka qaado (download mp3)
Su’aal #157: Haweeneey umal ah ramadaan u soo galay?
oktober 4th, 2008 by Nasir
Sheikh waxaan ku suaali lahaa in aad ii sheegtid bishii ramadaan wey ina soo haysaa inshallah, tii hore waxaan ahaa xaamilo badankeedina ma soomin tanna wey ii soo galaysaa anigoo nuujinaya oo tii horana la igu leeyahay maxaan ka yeelaa tii hore inta aanay tani ii soo galin iyo tanba wa jazakumullahu khayran.
Su’aal #154: Ramadaanka ma in la seexdo baa ku wanaagsan?
mohamed Wuxuu soo qoray/qortay:
as/k marka hore : ramadaanka in la seexdo iyo in la jiifto yuu ku wanaagsan diinta seey maxeey ka qabtaa.
Su’aal #153: aniga oo sooman dabaal ma aadi karaa?.
aniga oo sooman dabaal ma aadi karaa oo masoo dabaalankaraa.
Su’aal #152: Xisaab ma lagu soomi karaa ayadoon la arag bisha?.
cali macalin nuur Wuxuu soo qoray/qortay:
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabara kaatuhu shaykhanaa ilaahay ha idinka abaal mariyo adeega muhiim kaa ee aad diinta ilaahay uahaysiin adiga iyo culimada kula midka ah ilaahayna waxaan kaagaga rajaynaa inaad abaal marinteeda hesho gaar ahaan waqtigaan fitanta iyo mixanku jiraan juhuudii aaad bixisay hadii aan su aasha ugudbo shiikh waxaan ahay arday malaysiya wax kabarta marka ramadaan ka intaan lagaarinaa lasheegaa maalinta la afurayo ama lasoomayo waxaa dhici karta marka in lakhilaafo 1da bisha waxaana jirta in nabigu yiri(assowmu yowma tasuumuuna walfidru yowma tufdiruuna )marka xadiithkaasi daliil muu yahay in lala soomo dadkaasi aad lajoogto ama doowladaasi aad xukunkeeda hoostagto hadii aan koowdii bisha qofina kasoomayn mandiqadaada waasamaxaay macnaha xadiithka oo koobani baarakallaahu fiika asalaamu calaykum.
Su’aal #151: Qof sooman oo dhiig laga qaaday?.
c/fatax ahmed salaad Wuxuu soo qoray/qortay:
asalamu calaykum warax matulaahi wabarakaa tahu,waxaan mahad u celinaa walalaha webkan,ilahayna misanka ha idin kugu daro.jzkl khayraa,waxaan qabaa su,aal. taas oo ah aniga oo soo man hadii dhiig la iga qaado soonkii ma ii jiraa mise waa iga jabay waxaana iskaga qaday xanuun aan daremayo wa jzkl khayr.
Su’aal #147: Qof weyn aan soomi karin?
oktober 1st, 2008 by Nasir
Hooyaday weyn oo qof waayeel ah soomi karahayn fidyo intee la’eg ayaan ka bixiyaa? Marna ma lawada bixin karaa?
Su’aal #102: Nin sooman oo ay ka timid wax ragga ka yimaada
august 7th, 2007 by Nasir
cabdiladhiif Wuxuu soo qoray:
sheeq anoo sooman hadii ay iga timaado waxa raga kayimaado sonka ma iga buraa?
Halkan ka dhageyso jawaabta
Maamulka bogga (admin)
Design by: Nin alle
»» Ku noqo bogga hore